Accomplice Media မှ Eva Michon မှ“ အချိန်ကာလ၏ဂုဏ်အသရေကို“ Canceled” မှစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ကြံရာမီဒီယာရဲ့အီဗာ Michon "မှပယ်ဖျက်" တွင်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရဲ့အလှအပစူးစမ်း
ကြံရာမီဒီယာရဲ့အီဗာ Michon "မှပယ်ဖျက်" တွင်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရဲ့အလှအပစူးစမ်း
Ace ကို & Jig များအတွက် Young ကဒါရိုက်တာရဲ့စက္ကန့်ဖက်ရှင်ဗီဒီယိုထဲမှာ featured Style.com'' s ကိုဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်။
Los Angeles မြို့ပေးဆက်ကြသူများ ဖျက်သိမ်းဒါရိုက်တာ, တိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင် အီဗာ Michon ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Ace ကို & Jig များအတွက်လူငယ်တစ်ဦးပုံစံသူမရိုက်ကူးဖို့ထင်ခဲ့သည်ဗီဒီယိုဖြစ်ပျက်မဟုတ်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန် LA ကရောက်ရှိလာသည်။ ဒါကြောင့်သူသည်ကိုယ်နှင့်အတူ ... တချို့အရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
Sean က Nicholas ဗေ့ခ်ျရဲ့တောက်ပသီချင်းကနေဒါပေါ့ပ်အဆိုတော်မှ Set သဘာဝကျကျသူမကသူမ၏ဟိုတယ်တွင်ပြေစေပြီးအဖြစ်ဗီဒီယို (စွမ်းဆောင်ရည်အနုပညာရှင်အလက်ဇန္ Marzella နေဖြင့်ကစား) ကိုမိန်းမငယ်အောက်ပါအတိုင်း, ဗင်းနစ်သဲသောင်ပြင်များနှင့် Griffith ကပန်းခြံသွားရောက်လေ့လာနှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများထံမှစာသားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီးရီး disregards ။
အားဖြင့် US မှာကြော်ငြာတာဝနျမြားအဘို့အကိုယ်စားပြုသူ Michon ပြောပါတယ်, "ငါကမ္ဘာကြီးကိုလျစ်လျူရှုနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း၏စိတ်ကူးကြိုက်တယ်" ကြံရာမီဒီယာ.
Michon တစ်ချောင်, ကြံဆတီထွင်မှုထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်, တနေ့ထဲမှာရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် Drew Bienemann နှင့်တကွ, ရုပ်ရှင်ပစ်သတ်။ "မဟာမိတ်များကင်မရာအပေါ်အလွန်သဘာဝကဖြစ်ပါတယ်" ဟု Michon Marzella အတူလုပ်ကိုင်၏ကပြောပါတယ်။ "ဒီမြေတပြင်လုံးအတှေ့အကွုံပျော်စရာတွေအများကြီးပဲ။ "
ဖျက်သိမ်း Ace ကို & Jig ဒီဇိုင်နာများ cari Vaughan နှင့် Jenna Wilson ကသူတို့ပြိုလဲလိုင်းမိတ်ဆက်ရှိရာခေတ်မှီ Boutique Silver, ရေကန်ထဲမှာ Mohawk အဘိဓါန်အထွေထွေ Store ကမှာပြ။ ဒါဟာအပေါ်သူ့ရဲ့အွန်လိုင်းပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း Style.com ယင်း၏ဗီဒီယိုဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှင့်လည်းနယူးယောက်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ featured ထားပြီး အဆိုပါဖြတ်ပါ။
အဆိုပါဗီဒီယို Ace ကို & Jig များအတွက် Michon ရဲ့ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့အစောပိုင်းကဗီဒီယို အိမ်ဧည့်သည် မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘို့အ housesitting နေစဉ်အသေးစားတွေလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့စီးရီးတွေ့ကြုံသူတစ်ဦးမိန်းမငယ်အပေါ်စင်တာ။
ကြံရာပါမီဒီယာ, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက www.accomplice-media.com/
client: Ace ကို & Jig
စာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာ: အီဗာ Michon
အခွက်တဆယ်: အလက်ဇန္ Marzella, Ana Kraš
ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်: Drew Bienemann
ဂီတ: "သဘာဝ" Sean က Nicholas ဗေ့ခ်ျအားဖြင့်
stylist: ဧပြီလ Hughes
TITLE: Show ကိုအုပ်စုနဲ့ Colin Bergh
ကြံရာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ဒါရိုက်တာများ 2015-04-30
ယခင်: ဒါဟာရီးရဲလ်ရဲ့ဒါကအချိန်! Riedel ရဲ့ STX-200 Professional က Skype ကို Interface ကိုမက်ဒရစ်မှ Connect ကိုပရိသတ်များကူညီပေး
နောက်တစ်ခု: Sonzero ရုပ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ဥဩစတူဒီယိုနှင့်အတူမဟာဗျူဟာ Link ကိုတဆင့်ထုတ်လုပ်မှုပါဝါတိုးမြှင်